Maninona ny masontsika no mila skema fandokoana miloko mifameno ... Ary aiza no ahafahanao manamboatra azy ireo | Martech Zone
Fantatrao ve fa misy ny siansa biolojika ao ambadiky ny fomba ifanarahan'ny loko roa na mihoatra? Tsy mpitsabo maso na optometrist aho fa hiezaka handika ny siansa eto ho an'ny olona tsotra toa ahy. Andao atomboka amin'ny loko amin'ny ankapobeny.
Ny loko dia matetika
Paoma mena… marina? Eny, tsia. Ny fahita matetika ny fomba ahitana taratra ny taratra sy ny refurbur amin'ny tampon'ny paoma dia mahatonga azy ho voamariky izany, navadiky ny masontsika ho famantarana, nalefa tany amin'ny atidohantsika izay ahalalantsika azy ho "mena". Eh… mandratra ny lohako izany raha mieritreritra izany fotsiny. Marina izany… loko dia fahazavana matetika fotsiny. Ity misy fomba fijery iray momba ny spectrum electromagnetic sy ny refin'ny loko tsirairay:
Izany indrindra no mahatonga ny hazavana fotsy manondro ny prisma hamokatra avana. Ny tena zava-mitranga dia ny fanovana ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny kristaly satria mihodina ny hazavana:
Ny prisma kristaly dia manaparitaka hazavana fotsy amin'ny loko maro.
Detector matetika ny masonao
Ny masonao dia mpamantatra fahita matetika fotsiny ho an'ny elanelan'ny hatetika miloko amin'ny fatrana elektromagnetika. Ny fahaizanao mamantatra loko dia mitranga amin'ny alàlan'ny karazana cone isan-karazany amin'ny rindrin'ny masonao izay mifamatotra amin'ireo hozatra optikao. Ny elanelam-potoana isaky ny fahita matetika dia tsikaritry ny sasany amin'ireto cone ireto, avy eo nadika ho fambara amin'ny nerveux optika, nalefa tany amin'ny atidohanao, izay nahitana azy.
Efa nahatsikaritra ve ianao fa afaka mibanjina fotoana lava amin'ny zavatra tena mifanohitra be, mitodika any lavitra, ary manohy mahita sary tsy mifanaraka amin'ny loko voalohany nojerenao? Andao lazaina fa kianja manga eo amin'ny rindrina fotsy io:
Rehefa afaka kelikely, ny sela eo amin'ny masonao izay manodina hazavana manga dia ho reraka, hahatonga ny famantarana alefany any amin'ny atidohanao ho malemy kokoa. Koa satria io ampahany amin'ilay fiparitahana hita maso io dia voahitsakitsaka kely, rehefa mijery rindrina fotsy ianao rehefa avy nibanjina ny kianja manga, dia hahita sary masiaka voasary malefaka ianao. Ny zavatra hitanao dia ny hazavam-pahazavana fotsy avy amin'ny rindrina, mihena manga kely, izay zaran'ny ati-dohanao toy ny voasary.
Teoria miloko 101: ny fanaovana loko milamina ho anao
Raha tsy nisy izany havizanana izany dia tsy mila miasa mafy ny masontsika sy ny saintsika handika ny halavan'ny halavam-be (oh: ny loko) hitany.
Fifanarahana am-pitoviana amin'ny tabataba
Andao hanao fampitahana ny feo mifanohitra amin'ny lokony. Raha mihaino fehezan-dalàna sy volume samihafa tsy mifameno ianao, dia hoheverinao ho toy izany tabataba. Tsy mitovy amin'ny loko izany, izay misy ny famirapiratana, ny fifanoherana ary ny loko hita hita maso mitabataba na mifameno. Ao anatin'ny mpampita sary rehetra dia te-hiasa amin'ny firindrana izahay.
Izany no antony tsy ahitanao fanampiny ao ambadiky ny sarimihetsika manao akanjo mena mamirapiratra. Ary izany no mahatonga ny mpanao haingo anatiny hiasa mafy hahita loko mifameno manerana ny rindrina, fanaka, zavakanto, ary ireo endrika hafa amin'ilay efitrano noforonin'izy ireo. Ny lokony dia manakiana amin'ny famoronana ny toe-tsaina mahazo ny mpitsidika rehefa miditra ao izy ireo mifototra amin'ny fomba mora azon'ny ati-dohany handika ireo loko.
ny paleta loko dia mitovy amin'ny fanangonana tarika amin'ny firindrana tsara. Ary toy ny feo sy ny zavamaneno mivondrona mifanakaiky amin'ny volony sy ny hatetika… dia toy izany koa ireo loko mifameno amin'ny paleta fandokoanao. Ny famolavolana palette miloko dia endrika kanto ho an'ireo matihanina izay nanaraka tsara ny fahitany ny lokony, saingy tena siansa momba ny informatika ihany koa izy io satria azo isaina ireo refesim-piraisana.
Bebe kokoa momba ny firindrana tsy ho ela… andao hiverina amin'ny teoria loko.
Pixel ao anatin'ny fantsom-pifandraisana nomerika dia fitambaran'ny mena, maitso ary manga. Mena = 0, maitso = 0, ary manga = 0 dia aseho toy ny fotsy ary mena = 255, maintso = 255, ary manga = 255 dia hita toy ny mainty. Ny zavatra rehetra eo anelanelany dia loko hafa misy an'ireo telo ireo. Ny tena fototry ny fandrafetana loko mifameno dia tsotra… esory fotsiny ny sanda RGB amin'ny 255 ho an'ny sandan'ny RGB vaovao. Ity misy ohatra iray:
Ny fahasamihafana eo amin'io hazavana maivana eo amin'ny volomboasary sy manga io dia mifanalavitra lavitra fa mampifanohitra izany, saingy tsy dia lavitra loatra ka sarotra ho an'ny masontsika ny mandika. Ny refes-loko dia mifameno sy mahafinaritra an'ireo mpandray antsika!
Mora ny manoratra loko iray… ny fandefasana loko 3 na maromaro mifameno dia mitaky anao hikajiana isa mitovy amin'ny tsirairay amin'ireo safidy. Izany no antony mpamokatra teti-doko miloko tongava mora raisina! Vitsy ny fanisana ilaina, ireo fitaovana ireo afaka manome anao loko maro izay mifameno.
Ny kodiarana miloko
Ny fahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny loko dia azo jerena tsara amin'ny fampiasana kodiarana miloko. Ny loko dia alamina anaty boribory tsy miankina amin'ny fahita matetika. Ny halaviran'ny radial dia ny mahavoky ny loko sy ny toerana azimuthal eo amin'ny boribory toy ny volon'ny loko.
Fun zava-misy: Sir Isaac Newton no namolavola voalohany ny Color Wheel tamin'ny 1665, fototry ny andrana nataony tamin'ny prisma. Ny andrana nataony dia nanjary teôria fa ny mena, mavo ary manga no loko voalohany niavian'ny loko hafa rehetra. Fanamarihana hafa… nasiany «note» mozika isaky ny loko.
Ampiaraho amin'ny Harmony aho…
Karazana Harmonies miloko
Ny fifandraisana misy eo amin'ny sy ny fomba fanisana ny andiam-pankasitrahana tsirairay dia fantatra amin'ny anarana hoe firindrana. Ity misy horonantsary topy maso tsara:
Ny toetra samihafa dia mifandray amin'ny karazany tsirairay:
analogous - vondrona loko mifanila amin'ny kodiarana miloko.
Monochromatic - vondrona azo avy amina haingo tokana ary nitarina tamin'ny alàlan'ny alokalony, ny feony ary ny tints.
Andriamanitra telo mitambatra nivavahan'izy - vondrona loko misy elanelam-potoana manodidina ny loko kodia
mifameno - vondrona loko mifanohitra amin'ny kodiarana miloko.
Split Complementary - ny fiovaovan'ny fifamenoana izay mampiasa loko roa mifanila amin'ilay famenony.
Rectangle (Tetradic) - mampiasa loko efatra namboarina ho mpivady roa mifameno
Square - mitovy amin'ny mahitsizoro, fa miaraka amin'ireo loko efatra rehetra dia milanja mitovy manodidina ny faribolana miloko
iombonana amin'ny - ny loko sy ny loko roa mifanila amin'ny lokony mifameno
lafiny - fanitsiana ny tint (fitomboan'ny hazavana), na alokaloka (haizina) amin'ny loko voalohany.
Tsy lohahevitra lohahevitra ireo, fa ny kajy matematika tena izy miaraka amin'ny anarana mahafinaritra ampiharina manampy anay hahalala bebe kokoa ny kajy.
Generator ny loko paleta miloko
Amin'ny fampiasana maodelim-palette mpanamboatra loko, dia afaka mahazo loko mitambatra tsara sy mifameno toy ity ianao:
Matetika aho no mampiasa mpanamboatra teti-doko miloko rehefa miasa amin'ny tranokalan'ny mpanjifa aho. Satria tsy manam-pahaizana momba ny loko aho, ireo fitaovana ireo dia manampy ahy hisafidy zavatra tsara kokoa toa ny fiaviana, ny sisintany, ny fiaingan'ny tongotra, ny lokon'ny bokotra voalohany sy faharoa. Ny valiny dia tranokala iray izay mahafinaritra ny maso hatrany! Paikady an-kolaka sy mahery vaika mampihatra ny volavolanao na inona na inona - manomboka amin'ny doka ka hatramin'ny tranonkala iray manontolo.
Ireto misy mpamokatra teti-doko miloko tsara an-tserasera:
Adobe - fitaovana mahafinaritra miaraka amin'ny loko to5 ahafahanao mizaha toetra isan-karazany, manao fanitsiana, ary mitahiry ny lohahevitrao amin'ny vokatra Adobe rehetra aza.
BrandColors - ny fanangonana kaody marika marika ofisialy lehibe indrindra manodidina.
Canva - mampakatra sary dia hampiasain'izy ireo ho fototry ny palette-nao!
Colllor - mamokatra paleta miloko tsy miovaova amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Mpamorona loko - Misafidiana loko fotsiny na ampiasao ireo loko efa voafidy ary ataon'ny app ny ambiny.
Mihaza loko - Sehatra maimaimpoana sy malalaka ho an'ny aingam-panahy amin'ny loko miaraka amina paleta miloko an-tanana an'arivony
Colorkuler - mamorona paleta miloko ho an'ny Instagram mba hahafinaritra azy kokoa.
Colormind - mpamorona teti-doko miloko mampiasa fahalalana lalina. Afaka mianatra ny loko miloko amin'ny sary, sarimihetsika ary kanto malaza izy io.
Colorspace - mampiditra loko iray na telo fotsiny ary mamorona drafitra vitsivitsy!
Kaody Colour - traikefa an-tsehatra tena milay amin'ny famoronana paleta loko misy fomba firindrana maromaro eo ankavia.
COLORSlovers - vondrom-piarahamonina mpamorona iray izay mamorona sy mizara loko, palety ary modely ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, miresaka ny fironana farany, ary mijery lahatsoratra miloko.
Coolers - mamorona paleta tonga lafatra na mahazo aingam-panahy amin'ny loko miloko tsara tarehy an'arivony.
Mpaka sary loko - Ampiasao ilay mpisafidy paleta hamoronana andian-loko izay mitovy equidistant.
Khroma - mampiasa AI hianarana izay loko tianao ary mamorona palety ho hitanao, hikarohanao ary hitahiry anao.
Material Design - mamorona, mizara ary mampihatra loko amin'ny UI anao. Izy io dia miaraka amin'ny fanondranana ho an'ny fampiharana anao!
Loko Muzli - asio anarana na kaody loko, ary mamokatra paleta tsara tarehy.
Paletton - misafidy loko fototra ary hahazo aingam-panahy.
Veranda - mahazo aingam-panahy avy amin'ny paleta loko mahatalanjona taonina.
Loko sy fahafaha-miditra
Azafady tadidio rehefa manapa-kevitra ny hamolavola ny paikady palette manaraka ianao fa misy olona marobe manana fahasembanana amin'ny fahitana sy tsy fahampiana loko izay mila mifanerasera amin'ny zavatra niainanao.
Ampitahao - Ny loko tsy miankina tsirairay dia misy a luminance. Ny lokon'ny overlay sy ny zavatra mifanila aminy dia tsy maintsy manana refy luminance somary 4.5: 1 hahafahan'ny olona manana fahasembanana amin'ny fahitana manavaka azy ireo. Tsy handalo olana amin'ny fanandramana hikajiana ny tahan'ny tenanao aho, azonao atao ny mizaha ny refy amin'ny loko roa Miloko, Ratio Contrast, na Colorsafe.
iconography - Ny fanasongadinana ny saha amin'ny mena dia tsy manampy olona tsy ampy loko. Aza hadino ny mampiditra karazana hafatra na kisary mba hampahafantaran'izy ireo fa misy olana koa.
Focus - Betsaka ny olona mivezivezy amin'ny klavie na ny écran. Hamarino tsara fa ny interface ny mpampiasa anao dia noforonina araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny tagging fidirana ho azy ireo hanararaotra ny tranokalanao Ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fahitana, ny fampiasana habaka fotsy sy ny fahaizana mampitombo na mampihena ny haben'ny endritsoratra izay tsy manimba ny fisehony dia manakiana.
Manam-pahaizana momba ny maso ve ianao? Manam-pahaizana momba ny loko? Manam-pahaizana momba ny fidirana? Aza misalasala manome ahy tari-dalana hanatsarana ity lahatsoratra ity!
Tags: analgouscanvamatetika ny lokopaleta lokoteti-doko vita amin'ny lokopaleta milokolokoteoria lokolokomifamenoloko mifamenoiombonana amin'nymasomonochromaticmahitsi-maitso manga menargblafinymifamenokianjatetradicAndriamanitra telo mitambatra nivavahan'izy
InfluencerActive: mitadiava mpanelanelana B2B mora foana amin'ny fampielezana fampielezana Influencer manaraka